လူကာကူကို ခနဲ့သွားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အေးဂျင့် - Sports Gabar
လူကာကူကို ခနဲ့သွားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အေးဂျင့်
June 15, 2019 - by Lu Nyochaw
လူကာကူဟာ အေးဂျင့်ဖြစ်သူ ပါစတိုရယ်လာ ပို့ထားတဲ့ မက်ဆေ့တွေကို ရီပလိုင်း မပြန်ဘဲ လစ်လျူရှုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ ပါစတိုရယ်လာက လူကာကူရဲ့ အင်စတာဂရမ်ပို့စ်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာ ခနဲ့တဲ့ မှတ်ချက်တစ်ခုကို ၀င်ရောက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
စီးရီးအေကလပ်အင်တာမီလန်အသင်းနဲ့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီး ယူနိုက်တက်မှာ အနာဂတ်မသေချာဖြစ်နေတဲ့ လူကာကူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကနေတင်ထားခဲ့တဲ့ အင်စတာဂရမ်ပို့စ်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာ ပါစတိုရယ်လာက သူပို့ထားတဲ့ မက်ဆေ့တွေအတွက် လူကာကူကို အသိပေးမှုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပါစတိုရယ်လာက လူကာကူရဲ့အင်စတာဂရမ်ပို့စ်အောက်မှာ –
” WhatsApp မှာ မင်းဆီ ငါပို့ထားတဲ့ မက်ဆေ့တွေကို မင်းကြည့်ပြီးပြီလား?? “ဆိုတဲ့စာသားကို ဟားတိုက်ရယ်မောနေတဲ့ emojis (HaHa)သုံးခုနဲ့အတူ မှတ်ချက် ၀င်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေ ပြီးတဲ့နောက် အသက် (၂၆)နှစ်အရွယ် လူကာကူဟာ လက်ရှိမှာ သူ့ရဲ့အားလပ်ရက်ကို ဖြတ်သန်းနေပြီး၊ ယူနိုက်တက်ဆီ ပြန် မပြန်ကိုတော့ သေချာမသိရသေးပါဘူး။ အင်တာမီလန်နည်းပြသစ်ဖြစ်လာတဲ့ အန်တိုနီယိုကွန်တီကတော့ သူ့ရဲ့အဓိက ပစ်မှတ်အဖြစ် လူကာကူကို ချိန်ရွယ်နေပြီး နွေဈေးကွက် မပိတ်ခင်မှာ ခေါ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ လူကာကူက-
” ကွန်တီက ကျွန်တော့်ကို အင်တာမီလန်ဆီခေါ်ချင်နေတာ ကောင်းပါတယ်၊ သူက ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းပြတစ်ယောက်ပါ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားပြီးပါပြီ၊ ဒါပေမဲ့ အဲတာကိုတော့ ယူနိုက်တက်နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်ကို လေးစားသောအားဖြင့် လျှိုဝှက်ထားရပါဦးမယ် ” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
လူကာကူဟာ (၂၀၁၇)ခုနှစ်တုန်းက အဲဗာတန်အသင်းကနေ ယူနိုက်တက်အသင်းထံကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် (၇၅)သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီး၊ အိုးထရက်ဖို့မှာ (၉၆)ပွဲကစားကာ၊ (၄၂)ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ကတော့ လူကာကူကို အနည်းဆုံး ပေါင် (၇၅)သန်းထက် မလျော့တဲ့ နှုန်းထားနဲ့ ရောင်းချလိုနေပြီး၊ အင်တာအနေနဲ့လည်း အဲဒီ့ ပမာဏကို မပေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင် ကစားသမား အလိုက်ပေးပြီး ကမ်းလှမ်းလာဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
လူကာကူကို ခနဲ့သှားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့အေးဂငျြ့
လူကာကူဟာ အေးဂငျြ့ဖွဈသူ ပါစတိုရယျလာ ပို့ထားတဲ့ မကျဆတှေ့ကေို ရီပလိုငျး မပွနျဘဲ လဈလြူရှုခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ ဒါကိုမကနြေပျတဲ့ ပါစတိုရယျလာက လူကာကူရဲ့ အငျစတာဂရမျပို့ဈတဈခုရဲ့အောကျမှာ ခနဲ့တဲ့ မှတျခကျြတဈခုကို ဝငျရောကျရေးသားခဲ့ပါတယျ။
စီးရီးအကေလပျအငျတာမီလနျအသငျးနဲ့ သတငျးတှထှေကျပျေါနပွေီး ယူနိုကျတကျမှာ အနာဂတျမသခြောဖွဈနတေဲ့ လူကာကူရဲ့ ကိုယျပိုငျအကောငျ့ကနတေငျထားခဲ့တဲ့ အငျစတာဂရမျပို့ဈတဈခုရဲ့အောကျမှာ ပါစတိုရယျလာက သူပို့ထားတဲ့ မကျဆတှေ့အေတှကျ လူကာကူကို အသိပေးမှုလညျးပွုလုပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပါစတိုရယျလာက လူကာကူရဲ့အငျစတာဂရမျပို့ဈအောကျမှာ –
” WhatsApp မှာ မငျးဆီ ငါပို့ထားတဲ့ မကျဆတှေ့ကေို မငျးကွညျ့ပွီးပွီလား?? “ဆိုတဲ့စာသားကို ဟားတိုကျရယျမောနတေဲ့ emojis (HaHa)သုံးခုနဲ့အတူ မှတျခကျြ ဝငျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
နိုငျငံတကာပှဲစဉျတှေ ပွီးတဲ့နောကျ အသကျ (၂၆)နှဈအရှယျ လူကာကူဟာ လကျရှိမှာ သူ့ရဲ့အားလပျရကျကို ဖွတျသနျးနပွေီး၊ ယူနိုကျတကျဆီ ပွနျ မပွနျကိုတော့ သခြောမသိရသေးပါဘူး။ အငျတာမီလနျနညျးပွသဈဖွဈလာတဲ့ အနျတိုနီယိုကှနျတီကတော့ သူ့ရဲ့အဓိက ပဈမှတျအဖွဈ လူကာကူကို ခြိနျရှယျနပွေီး နှဈေေးကှကျ မပိတျခငျမှာ ချေါနိုငျဖို့ မြှျောလငျ့နပေါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျလို့ လူကာကူက-
” ကှနျတီက ကြှနျတေျာ့ကို အငျတာမီလနျဆီချေါခငျြနတော ကောငျးပါတယျ၊ သူက ကမ်ဘာပျေါမှာရှိတဲ့ အကောငျးဆုံးနညျးပွတဈယောကျပါ၊ ကြှနျတေျာ့ရဲ့အနာဂတျအတှကျတော့ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ဆုံးဖွတျခကျြ ခထြားပွီးပါပွီ၊ ဒါပမေဲ့ အဲတာကိုတော့ ယူနိုကျတကျနဲ့ခြုပျဆိုထားတဲ့ စာခြုပျကို လေးစားသောအားဖွငျ့ လြှိုဝှကျထားရပါဦးမယျ ” လို့ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
လူကာကူဟာ (၂၀၁၇)ခုနှဈတုနျးက အဲဗာတနျအသငျးကနေ ယူနိုကျတကျအသငျးထံကို ပွောငျးရှကွေ့ေး ပေါငျ (၇၅)သနျးနဲ့ ပွောငျးရှလေ့ာခဲ့ပွီး၊ အိုးထရကျဖို့မှာ (၉၆)ပှဲကစားကာ၊ (၄၂)ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ကတော့ လူကာကူကို အနညျးဆုံး ပေါငျ (၇၅)သနျးထကျ မလြော့တဲ့ နှုနျးထားနဲ့ ရောငျးခလြိုနပွေီး၊ အငျတာအနနေဲ့လညျး အဲဒီ့ ပမာဏကို မပေးနိုငျခဲ့ရငျတောငျ ကစားသမား အလိုကျပေးပွီး ကမျးလှမျးလာဖှယျရှိနပေါတယျ။
Previous Article တိုင်လီမန်းကိုခေါ်ယူဖို့မျက်စိကျနေတဲ့မန်ယူနိုက်တက်
Next Article လက်ရွေးစင်အသင်းကြီးမှာအရွေးခံခဲ့ရလို့ ၀မ်းသာနေတဲ့ ဖြူဖြူဝင်း